Momba anay - Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd.
Maninona i Huayuemei Lighting
Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2006. Huayuemei Lighting ho toy ny Professional LED Light Strip mpanamboatra, Manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fizarana mandritra ny 10 taona. Miaraka amin'ny fotodrafitrasa fanamboarana 2.300 sqm any Guangzhou, Sina.
Manana tombony bebe kokoa amin'ny famolavolana sy ny traikefa amin'ny famokarana, atrikasa, fanamorana, ekipa varotra isika.
Toro lalana: kalitao tsara sy vidiny mifaninana, sanda lehibe ho an'ny mpanjifa.
Ny foto-kevitry ny vokatra dia tsara indrindra amin'ny vokatra azo ampiasaina, manintona ary sarobidy indrindra (LED Strip Light).
Manaiky ny kaomandy OEM ho an'ny filan'ny mpanjifa manokana koa izahay. Hanatsara hatrany ny vokatra vaovao izahay, hanatsara ny kalitaon'ny vokatra ary hanatsara ny serivisinay.
Manana ekipa matanjaka izahay hanao ny kaomandinao amin'ny fotoana mahomby, ny mpanjifa fandefasana ara-potoana. Izahay koa dia manana fenitra famokarana tena henjana, alao antoka fa ny vokatra rehetra dia vita tsara amin'ny rohy rehetra amin'ny rojom-pamokarana.
Huayuemei dia mpamatsy matihanina amin'ny LED Strip Light indrindra ao anatin'izany ny Backlight LED Strip Light, Edge-lit LED Module Bar, Flexible / Rigid LED Strip Light, Backlight LED Module, niasa tamin'ny LED Lighting any Shina nandritra ny 10 taona mahery izahay. Manana safidy namboarina ihany koa izahay hanampiana ny mpanjifa hanatsara ny fantsom-pamokarany ho an'ny fantsona samihafa.
Ny ekipanay mivarotra dia manandrana manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny serivisy tena tsara. Ankoatr'izay, mifototra amin'ny fifandraisantsika akaiky amin'ireo mpanjifa dia afaka mahazo ny mombamomba azy voalohany hatrany amin'ny tsena izahay ary azo namboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa manokana. Maherin'ny 10- taona ny fitomboana, za-draharaha amin'ny ODM ary koa amin'ny OEM. Miaraka amin'ny vokatra sy serivisy premium anay, nanangana fiaraha-miasa tsara izahay sy ny mpanjifa amin'ny tsena anatiny sy ampitan-dranomasina. Raha liana amin'ny iray amin'ny entanay ianao na mila fampahalalana bebe kokoa, aza misalasala mifandray aminay. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay atsy ho atsy.
Kalitao & fanamarinana
Manamboatra trano izahay hiantohana ny kalitao avo indrindra. Ny jironay LED Strip dia CE, Rosh ary UL voamarina.
Ny fahatsorana no mantra antsika. Mora apetraka ny vahaolana, mora esorina ary mora tantanana. Ary izahay dia hanao araka ny fangatahanao mba hanao vahaolana tsara indrindra ho anao.
Huayuemei Lighting dia indostria mpamorona sy orinasa mpivarotra mandroso ho an'ny zavatra ilainao rehetra. Ny famoronana dia mitondra sy manome aingam-panahy antsika.
Ny ekipanay R&D ao an-trano dia manadihady fironana vaovao ary mamolavola vokatra vaovao ho an'ity sehatra ity.
Manampahaizana amin'ny rollouts lehibe izahay noho ireo trano fanamboarana 2.300 sqm any Guangzhou, Sina.
Hanome serivisy varotra avo lenta sy tsara indrindra izahay.
Miaraka amin'ny traikefa 14 taona mahery, manana mpanjifa any amin'ny firenena 130 mahery sy tanàna mihoatra ny 4,500 izahay.